Shiinaha PAM-Anionic Polyacrylamide soosaarayaasha iyo alaableyda | Biyaha nadiifka ah
Soosaarida Kiimikooyinka Biyaha Nadiifka ah ee Co., Ltd.
Wakiilka Biyaha Sifeeya
Xinjirowga Loogu Tala Galay Rinjiga Cows
Wakiilka Ka saar Birta culus
Wakiilka Kala Saaraya Biyaha
Dabiiciga Silicon Defoamer
Flucculant Loogu Tala Galay Bullaacadda Badeecada
Caloosha Gaarka ah ee Macdanta
Wakiilka Diyaarinta Bilaashka ah ee Formaldehyde
Kiimikooyinka Ro Membrane
Wakiilka Biyaha Sifeeya CW-08
PAM-Anionic Polyacrylamide waxaa si ballaaran loogu dabaqay soo saarida noocyada kala duwan ee shirkadaha warshadaha iyo daaweynta bulaacada.
Badeecadani waa polymer-sare oo biyo-ku milmi kara, mana aha mid lagu milmi karo inta badan dareeraha dabiiciga, oo leh dhaqdhaqaaq wanaagsan oo jilicsan, waxayna yareyn kartaa iska caabinta khilaafaadka u dhexeeya dareeraha. Waxay leedahay laba nooc oo kala duwan, budo iyo emulsion.
1.Waxaa loo isticmaali karaa in lagu daaweeyo biyaha wasakhda ah ee warshadaha iyo qashinka macdanta.
2. Waxa kale oo loo isticmaali karaa in lagu daro walxaha dhoobada ku jira saliida, qoditaanka juqraafiga iyo caajis wanaaga.
Warshadaha kale-warshadaha sonkorta
Warshadaha kale-warshadaha dawooyinka
Warshadaha kale-warshadaha dhismaha
Warshadaha sameynta warqadaha
Caano Caan ah
Ogeysiis: Alaabtayada waxaa lagu sameyn karaa dalabkaaga gaarka ah.
1. Shayga waa in loo diyaar garoobaa xalka biyaha ee 0.1% sida fiirsashada. Way fiicantahay in la isticmaalo biyo dhexdhexaad ah.
2. Sheyga waa in si siman loogu kala firdhiyaa biyaha walaaqaya, kala-baxaana waa la dardargelin karaa iyadoo la diirinayo biyaha (ka hooseeya 60 ℃).
3. Qiyaasta ugu dhaqaalaha badan waxaa lagu go'aamin karaa iyadoo lagu saleynayo baaritaanka hordhaca ah. Qiimaha pH ee biyaha lagu daaweynayo waa in la hagaajiyaa daaweynta ka hor.
Markaad milixeyso emulsion-ka biyaha, waxay u maleyneysaa inay si dhaqso leh u walaaqayso si ay u sameyso polymer hydrogel-ka emulsion-ka si ku filan ula xiriirta biyaha isla markaana si dhakhso leh ugu faafto biyaha. Waqtiga kala diridu waa qiyaastii 3-15 daqiiqo.
Xirmada iyo Kaydinta
Xidhmada: 25L, 200L, 1000L durbaan caag ah.
Kaydinta: Heerkulka keydinta emulsion-ka waa mid u dhexeeya 0-35 ℃. Emulsion-ka guud waa la keydin karaa 6 bilood. Marka waqtiga keydinta uu dheer yahay, waxaa jiri doona lakab saliid ah oo la dhigayo lakabka sare ee emulsion waana caadi. Waqtigaan, wajiga saliida waa in lagu soo celiyaa emulsion iyadoo la adeegsanayo kacsanaanta farsamada, wareejinta bamka, ama kacsiga nitrogen. Waxqabadka emulsion wax saameyn ah kuma yeelan doono. Emulsion-ka wuxuu ku fariisanayaa heerkul ka hooseeya biyaha. Emulsion-ka la qaboojiyey waxaa loo isticmaali karaa ka dib marka uu dhalaaliyo, waxqabadkiisuna si weyn isma beddeli doono. Si kastaba ha noqotee, waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto in lagu daro qaar ka mid ah wax-soo-saarka lidka ku ah biyaha markii lagu qasi jiray biyaha.
Xirmo: Shayga adag waxaa lagu buuxin karaa bacaha gudaha ee gudaha, iyo waliba bacda polypropylene-ka leh ee lagu tolay boorso kasta oo 25Kg ah.
Kaydinta: Waa in la xidho oo lagu kaydiyo meel qalalan oo qabow oo ka hooseysa 35 ℃.
Xiga: PAM-Cationic Polyacrylamide